Counselling Corner Myanmar - ပျော်ရွှင်စေရန်နှင့် ပို၍ကောင်းမွန်သော ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဖြစ်စေရန် အကြံပြုချက်များ
ပျော်ရွှင်စေရန်နှင့် ပို၍ကောင်းမွန်သော ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဖြစ်စေရန် အကြံပြုချက်များ
Posted on ဇန်နဝါရီ 8, 2021 ဇန်နဝါရီ 20, 2021 | မှတ်ချက်များ မရှိပါ။
“၂၀၂၁ ဆီသို့ နောက်ပြန်ရေတွက်ခြင်းသည် နှစ်သစ်အတွက် မျှော်လင့်ခြင်းများကို သယ်ဆောင်လာနိုင်ပေသည်။ အားလုံးသိကြသည့်အတိုင်း ကပ်ရောဂါနှင့်အတူ ၂၀၂၀ ၏ ခါးသီးမှုများကို လူအများစု ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရသည်။ အိမ်တွင်းနေထိုင်ခြင်း၊ အိမ်မှနေ၍အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ Zoom မှတစ်ဆင့် ပြောဆိုခြင်း စသည်တို့သည် ကျွန်ပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘဝအစိပ်အပိုင်းဖြစ်လာပေသည်။ ကပ်ကာလအတွင်း စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် စိတ်အခြေအနေကောင်းမွန်ရေးတို့သည် လူအများစုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်လာသည်။ သို့ဖြစ်၍ ၂၀၂၁ ကို ကြိုဆိုရန်အတွက် ပျော်ရွှင်ကျန်းမာသည့် နေထိုင်မှုပုံစံရရှိရန် မည်သို့ ကြိုတင်ပြင်မည် ဆိုသည်ကို လေ့လာကြည့်မည်ဖြစ်သည်။”
၁။အဆိုး၊ အကောင်း အခြေအနေ နှစ်ခုလုံးပေါ် အာရုံစိုက်ပါ။
ကပ်ကာလအတွင်း သင့်အနေဖြင့် ယူကျုံးမရဖြစ်ခြင်း၊ ကြေကွဲခြင်း၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်း စသည်တို့ ကြုံတွေ့ရနိုင်ကာ အပျက်သဘောတွေးခြင်းများ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် လူအများအတူတကွစုပေါင်း၍ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ရိုင်းပင်းမှုများ၊ လုပ်အားဒါနပြုမှုများအားဖြင့် ကျွန်ပ်တို့၏ ကိုယ်ကျိုးစွန့်မှုကို အားကောင်းလာစေခြင်းတို့ကြည့်၍ အပြုအပျက်သဘောကို ချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။
၂။ အခက်အခဲကို အခွင့်အရေးအဖြစ် အသုံးချပါ။
ဤအခြေအနေအား မည်သို့အခွင့်ကောင်းယူရမည်ကို ဆင်ခြင်ပါ။ တစ်ဦးတည်သီးသန့်နေကြည့်၍ မိမိကိုယ်မိမိ ပြန်လည်ဆင်ခြင်မှု ပြုလုပ်ကာ နှစ်သစ်အတွက် လုပ်ဆောင်တာများအား သတ်မှတ်နိုင်သည်။
၃။ ၂၀၂၀ အတွေ့အကြုံအား ဝေဒနာအဖြစ် မမှတ်ယူဘဲ သင်ခန်းစာအဖြစ် မှတ်ယူပါ။
၂၀၂၀ အတွေ့အကြုံအား အတားအဆီးအဖြစ် မမှတ်ယူဘဲ တက်လှမ်းရာ လှေခါးထစ် အဖြစ် မှတ်ယူပါ။ ၂၀၂၁ ၌ သင် မည်သို့ပို၍ အားပြည့်သန်မာလာမည်ဆိုသည်ကို တွေးပါ။
အတိတ်မှ အကြောက်တရားများ၊ ဆုံးရှုံးမှုများ၊ စိတ်ပျက်စရာများအား တွေးနေမည့်အစား ဤကပ်ရောဂါမှ သင့်အား အဆိုးဖြစ်စေမည့်အရာများအား ပြုလုပ်ခြင်းမှ တားဆီးခဲ့သည်များကို တွေးပါ။
၅။ သင်၏အလုပ်အကိုင်အပေါ် အကောင်းမြင်ပါ။
သင်အလုပ်ပြုတ်သွားနိုင်သည် သို့မဟုတ် ရာထူးတိုးရန် နှောင့်နေးသွားသည် စသည်တို့ကို တွေးနေမည့်အစား ယခုလောလောဆယ်တွင် အရာရာဆိုင်းငံ့နေခြင်းဖြစ်ကာ အောင်မြင်ခြင်းအတွက် အခြားနည်းလမ်းများ အမြဲရှိသည်ဆိုသည်ကို တွေးနိုင်ပါသည်။
“၂၀၂၁ အတွင်းသို့ ယူဆောင်သွားနိုင်မည့် စွမ်းအားအကြီးဆုံးအရာသည် အကောင်းမြင်အတွေးပင် ဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်မိမိ သားရေကွင်းကဲ့သို့ တွေးကြည့်ပါ။ သားရေကွင်းအား အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ဆွဲဆန့်၍ ပြန်လွှတ်လိုက်လျှင် မူလနေရာထက် ပိုသော အတိုင်းအတာအထိ အမြဲ ပြန်ကန်လာလေသည်။ ထို့သို့ပြုခြင်းအားဖြင့် ၂၀၂၁ တွင် ပို၍ကောင်းမွန်ကျန်းမာသော ဘဝကို သင်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပေလိမ့်မည်။:”
Posted in Counselling Corner မှဆောင်းပါးများ.
← “Covid 19” ကာလမှာ အားလပ်ရက်ရာသီအတွင်း စိတ်ဖိစီးမှု…
ဇန်နဝါရီ လအတွက် Counselling Corner မှ… →
What to expect from Counselling Corner? တစ်ဉီးချင်းစီအတွက်
မေ 7, 2021
Counselling Corner မိတ်ဆက်
What to expect from Counselling Corner? အဖွဲ့အစည်းများအတွက်
မေ 6, 2021